Nollywood-ka Fespaco: "Bilow inaad haa ku riyootid riyadaada" - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Nollywood-ka Fespaco: "bilaabi haa riyadaada"
Nollywood-ka Fespaco: "bilaabi haa riyadaada"
davis 1 March 2019
Sidee looga baxsan karaa aayihiisa? Agaasimaha Oluseyi Asurf Amuwa oo ka tirsan Nigeria ayaa sheegay in sheekada Akande, oo ah qof dhallinyaro shaqo la'aanta ah oo ka adkaaday dhammaan caqabadaha uu la leeyahay caqligiisa iyo dhaqankiisa. Shaqo la'aanta, saboolnimada, cudurada, sixirka, waxba kama hor istaagin istaraatijiyadda wiilka yar ee ka baxaya Lagos in uu isku daydo nasiibkiisa tuulada, oo leh digo lo'da: "Bilow higga riyadaada". Sida filimka Nigerian, oo horeyba loo falanqeeyay xafladaha caalamiga ah, taas oo u dhiganta qaybteeda Nollywood waxayna la kulantaa Bandhigga Filimada Panafrican ee Ouagadougou (Fespaco) ee orodka loo yaqaan 'Golden Stallion of Yennenga'.
RFI : Hakkunde macnaheedu waa Hausa Inta u dhexeysa ". Maxaa " u dhexeeya laba »Ma hadlaa ?
Oluseyi Asurf Amuwa : Waa sheeko qof dhallinyaro ah oo u dhexeeya waxa uu doonayo iyo waxa uu dhab ahaantii u baahan yahay. Tani sidoo kale waa sheekada 30 milyan oo qof oo ku nool Nigeria oo shaqo la'aan ah. Shaqo la'aanta waa dhibaatada guud. Haddii aynaan samayn wax, waxaan ku fariisan doonaa bam-gelyo waqti. Waxaan ku toogtay waqooyiga Nigeria, halkaas oo dad badani aysan ku dhicin inay baxaan, sababtoo ah nabadgelyo-xumada ayaa soo saartay warbaahinta. Xaqiiqdii, woqooyiga dalka, waxaa jira fursado badan oo aan cidina ku darsan. Waa adag tahay in dadka lagu qanciyo. Anigoo ah Agaasime, waxaan u isticmaalaa macneheeda, shineemo, si aan uga gudbi karno cabsida dadka si ay u qabato fursadaha ka jira Afrika.
Sidee ayaad u aragtay fikradda ah sahaminta kartida digirta ee filimka ?
Bilowgii mashruuca, waxaan rabay in aan ka qeyb galo tallaabada Lagos. Markaas, waxaan u maleynayay in aan arkay filimado badan oo ka dhacaya Lagos. Sidaa darteed, waxaan doonayay inaan meel kale raadiyo. Waxaan baqdiyay cabsideyda oo waxaan aaday Waqooyiga Nigeria. Waxa aan arkay waxay ahayd in meel kasta oo lo'da iyo digir ahba jiray. Waxaan markaas ka fekernay sida aan u sameyn karno lacagta lo'da.
Iyada oo doorka ugu weyn ee filimku uu ahaa cilmi baaris caafimaad, waxay ku dhegtay ficilka filimka. Sidaa darteed waxaan dib u qori doonaa qoraalka oo waxaan ka dhigay suurtagalnimada in la isku dayo suntan lo'da. Dhaqdhaqaaqayaasha ayaa dhamaantood jecel fikirkaan waxayna sidoo kale sameeyeen filimka waqooyiga Nigeria.
Miyuu qayb ka yahay filinkaaga filimka? Nollywood ?
Haa, filimkaygu waa qayb ka mid ah Nollywood, waxaan matala Nollywood [qosol]. Tani waa filimkeyga koowaad ee filimka, ka dib markii qaar ka mid ah documentaries. Markii aan lacag u soo saaray mashruucaan, waxaan rabay in aan balaariyo raasumaal si aan u yareeyo khatarta maaliyadeed. Ka dib waxaan bilaabay olole ballaaran. Waxaan fiidiyow ku duubay qof haysta waraaq: "raadinta shaqo". Anigana waxaan u soo diray shabakadaha bulshada si ay u taageeraan filimkeyga koowaad. Waxaan nafteyda u maleeyay: Waxaan haystaa 4 000 dadka bogga Facebook iyo dadka 4 000 ee xisaabta Instagram, 8 000, tani waa inay ahaato mid ku filan lacag lagu uruuriyo.
Waxaad ku guulaysatay ?
Saddex usbuuc ka dib, waxaan lahaa kaliya 1,8 million nairas (4 385 euros), oo ku saabsan 10% gool, laakiin waxay siisay dhiirigelin ah in la helo maalgelin. Tan iyo markaas, filimku wuxuu ka tallaabsaday xuduudo badan waxaanan soo celiyay kharashyadeyda. Maanta, waxaan ka dhex muuqanayaa Fespaco, xafladda filimka ugu weyn ee Afrika. Marka, dib-u-fiirin, waxay ahayd go'aankii ugu fiicnaa ee aan samayn karo
Waxaan ka sarreeyaa Michael Jackson - South Nyangono
Netflix wuxuu u dagaalami karaa Oscar kale ee filimka ugu fiican leh mid ka mid ah filimadan - BGR